पशुपति क्षेत्रमा गाँजा, भाङ, धतुरोजस्ता नशालु पदार्थ सेवन गर्न प्रतिबन्ध - Onlinesamaya.com
पशुपति क्षेत्रमा गाँजा, भाङ, धतुरोजस्ता नशालु पदार्थ सेवन गर्न प्रतिबन्ध
माघ १४,काठमाडौँ । हिन्दुहरुको पवित्र तीर्थस्थल पशुपति क्षेत्रमा गाँजा, भाङ, धतुरोजस्ता नशालु पदार्थ सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आईतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी दूव्र्यसनीमा युवाहरुलाई फस्न नदिन पनि पशुपति क्षेत्रमा नशालु पदार्थ सेवन गर्न प्रतिबन्द गराइएको जानकारी गराएको हो ।
सरकारले प्रतिवन्ध लगाएका सबै खालका नशालु पदार्थ पशुपति क्षेत्रमा सेवन गर्न तथा विक्री वितरण गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकालले जानकारी दिए । कोषले महाशिवरात्रीको मुखैमा पशुपति क्षेत्रमा गाँजा, भाङलगायतका नशालु पदार्थ सेवन नगर्न पनि सबैमा आह्वान गरेको छ । कोषले साधुसन्तलाई पनि पशुपति क्षेत्र भित्र गाँजा, भाङलगायतका नशालु पदार्थ सेवन नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । सदस्य सचिव ढकालले पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक क्षेत्रकै रुपमा विकास गर्न पनि नशालु पदार्थ सेवन गर्ने कामलाई प्रतिवन्ध लगाउनु परेको स्पष्ट पारे ।
पत्रकार सम्मेलन बोल्दै डिएसपी अनुपम श्रेष्ठले कोषसँग मिलेर पशुपति क्षेत्रमा पनि नशालु पदार्थ सेवन रोक लगाउने गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।उनले नशालु पदार्थ सेवन गर्नेहरुमाथि कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए । पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रीमा खुलेआम गाँजा, भाङ लगायतका नशालु पदार्थ सेवन गर्ने गरिन्थ्यो । अव भने त्यसो गर्न नपाईने कोषले स्पष्ट पारेको छ ।
कसरी कमाउँछिन यी युवतीले एक घन्टामै १२ लाख ?
एमाले–माओवादीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सभामुखमा यसरी मिलायो भागबन्डा